Mahazo ny DAWN
Workgroup Mpitarika Anjara asa sy ny Andraikitra
DAWN mpikambana ao amin'ny Volana
Tuesday Night – Medical & Dental (olon-dehibe ihany)
Our free clinic is held on Tuesday nights. Tsy manolotra andro izany fitsidihana avy 6:00 ny 8:00 PM. Raha toa ka tsy manana fotoana, dia hahita anareo amin'ny ho avy aloha, manompo voalohany fototra. DAWN is an interprofessionally run free clinic and is staffed by medical students, mpitsabo, pharmacists, dental students and dentists, mpitsabo ara-batana, nurses, social workers, and mental health professionals.
Psychology – Fahasalamana ara-tsaina
Friday Afternoon Clinic – Ara-batana Therapy (By Appointment Only2pm-5pm)
Ny DAWN Clinic manolotra asa fitsaboana ara-batana maharitra ny Alarobia hariva. Isika mahita marary iray adiny nanome fotoana mba hanombantombanana sy hitondra ratra vaovao sy ny mitaiza fanaintainana olana, nanara-maso manome fanatanjahan-tena drafitra, ary hanatsara ny hetsika sy ny asa.
Afaka manampy ihany koa amin'ny:
Fikarohana ny rafi-pahasalamana
Raha manana hevitra na Hevitra avy aminao mikasika ny DAWN Clinic, Masìna ianao, mandehana eto hamita fohy fanadihadiana.
Aza misalasala mba hamita ny lasitra eo ambany raha te-hahazo nifandray aminay.
Mba asio ny anaranao, mailaka sy ny nomeraon-telefaona raha nifandray antsika momba ny fotoana, na te iray ny mpiasa ny hamaly ny fangatahanao.
[fifandraisana-teny-7 id ="92" title ="General Contact Form"]
Connect with us amin'ny